बलिउडका यी ११ नायिकाः जसकाे पिता थिए आर्मी अफिसर ! « गोर्खाली खबर डटकम
बलिउडका यी ११ नायिकाः जसकाे पिता थिए आर्मी अफिसर !
बलिउड र आर्मीबीचको सम्बन्ध निकै गहिरो छ । बलिउडमा आर्मीसँग सम्बन्धित धेरै फिल्महरु बनेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार आर्मीलाई भारतीय चलचित्र क्षेत्रमा निकै आदरमा साथ लिने गरिन्छ । बलिउडमा यस्ता धेरै चर्चित स्टारहरु छन् जो भारतीय शै न्य परिवारसँग स म्बन्ध राख्छन् ।
बलिउडका ती चर्चित ती ११ नायिकाहरु जो कुनै न कुनै रुपमा शै न्य परिवारसँग जोडिएका छन् । उनीहरु पारिवारिक पृष्ठभूमी शैन्य सेवासँग जोडिएको छ । कोही परिवारका सदस्य शै न्य सेवामा सामेल भएका छन् ।
सुन्दरी नायिका ऐश्वर्या राय । ऐश्वर्या एक आर्मी परिवारमा ज न्मिएकी हुन् । उनका पिता आर्मीमा अफिसर पदमा रहेर शै न्य सेवा गरेका थिए ।
प्रियंका चोपड़ाका पिता स्वर्गीय डा. अशोक चोपड़ा आर्मीमा डाक्टर थिए । यसकारण प्रियंकाले पनि भारतीय शै न्य परिवारसँग जोडिएकी छन् ।
लारा दत्ता एक पंजाबी परिवारमा जन्मिएकी हुन् । उनका पिता एल के दत्ता पनि भारतीय सेनामा विंग क मांडर थिए । उनी अहिले रिटायर्ड भएको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रीति जीन्टाका पिता दुर्गानंद जीन्टा पनि आर्मी अफिसर थिए । जब प्रीति १३ साल की थिइन् । उनका कार दु र्घट नामा परेर मृ त्यु भएको थियो । प्रीतिका ठूला भाई दीपांकर आ र्मी मै कमीशंड अफिसर रहेको रिपो र्टमा उल्लेख छ ।
विवाहपछि अभिनयको दुनियाबाट किनारा लाग्ने अभिनेत्री सेलिना जेटली शिमलामा बस्छिन् । उनका पिता वीके जेटली इंडियन आर्मीमा एक कोलोनल थिए ।
नेहा धूपियाका पिता कमांडर प्रदीप सिंह धूपिया भारतीय नेवीमा अफिसर थिए । नेहाको पनि शैन्य सेवासँग पूरानो सम्बन्ध छ ।
बलीउड अभिनेत्री चित्रांग्दा सिंह आफ्नो सुन्दरताका कारण पनि निकै चर्चित छिन् । उनका पिता निरंजन सिंह पनि एक रिटायर्ड आर्मी कोलोनल हुन् ।
गु ल पनागका पिता लेफ्टिनेंट जनरल पनाग भारतीय सेनामा थिए । जसका कारण अभिनेत्री गु लको बालापन पनि शै-न्य सेवासँग देशका बिभिन्न ठाउँहरुमा बितेको थियो ।
निमरत कौरको पृष्ठभूमी पनि आर्मीसँगै जोडिएको छ । तर उनको कहानी निकै दर्द-नाक छ । निमरतका पिता मेजर भूपिंदर सिंह भारतीय सेनामा अफिसर थिए । ४४ सालको उमेरमा कश्मीरमा आ तं-कबा दीले अ पह रण गरेर उनको ह त्या गरिदिएका थिए ।